गणतन्त्रको गाथा - विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ६, २०७६ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ ।’ यो भनाइ कुनै बस, माइक्रो र टेम्पोमा कोचिएर यात्रा गर्ने, धुलोधुवाँबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकको होइन । किमार्थ होइन । हुनै सक्दैन । यो आफ्नो सोझो बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डामा जमेको फोहोर पानी कुनै गाडीले उछिट्याएर जिउभरि हिलो छ्यापिएकी क्रुद्ध नारीको असहाय क्रन्दन होइन ।
यो होइन सामाजिक सञ्जालको उच्छृंखल स्टाटस कदाचित् । प्रतिपक्षले लगाएको आरोप पनि होइन । यो त सुविधासम्पन्न आवासमा बस्ने, धुलो, हिलो नटेक्ने, कालो सिसाभित्र बन्द वातानुकूलित वाहनमा सवार हुने सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारले सज्जित स्वयं प्रधानमन्त्री सर्वश्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो डेढ वर्षको शासन अवधिमा गरेका अवलोकनको निष्कर्ष हो ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले गणतन्त्रमाथि खतरा देखेर यति भनिसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तथापि यहाँ विषय त के हो भने गणतन्त्र संविधानका अक्षरमा आएको सत्य हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ एउटा राजा मासेर अनेक राजा–रजौटाको तामझाममा परिणत भएकोमा बढ्दो निराशा हो ।
गणतन्त्र यसका प्राधिकारीहरूको आचरणका कारण बदनाम हुँदैछ र त्यही बदनामीका कारण खतरामा पर्दैछ भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । गणतन्त्र बदनाम हुनुमा यसको आफ्नो कुनै दोष छैन, आफै त निर्विकार छ । मन्त्री हेर्नुहोस्, कुनै पनि निर्वाचित राजकीय पदधारीलाई हेर्नुहोस्, ती के जनताका प्रतिनिधि अर्थात् जनताजस्ता देखिन्छन् ? के तिनीहरू जनता हिँडेको बाटो हिंँड्छन्, जनता चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्छन् ? मन्त्री हुनासाथ उनीहरूलाई दरबारिया सम्बोधन चाहिन्छ । भात खान छाड्छन्, भुजा ज्युनार गर्न थाल्छन् ।
गणतन्त्र खतरामा परोस् भनेर अधिकार वञ्चित नागरिकले भनेका छैनन् । भनेका भए यसलाई अनायास मुखबाट निस्केको श्राप हो भन्न सकिन्थ्यो । अन्यायमा परेर सुनुवाइ नहुँदा पीडकलाई सराप्छन् नि पीडितले, त्यस्तै श्राप । तर गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनथालेको कथन स्वयं नेपालका सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न प्राधिकारीको भएको हुँदा वास्तवमै ज्यादै गम्भीर र विचारणीय भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट प्रणालीमाथि प्रहार भइरहेको छ र त्यसैका फलस्वरुप गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनआएको हो ?
स्मरण होस् जेठ १९, २०५८ मा तत्कालीन गद्दीनसिन महाराजाको सवंश विनाशसँगै नेपालमा गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त भएको थियो । त्यसपछि राजा बनाइएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रमा न राजोचित व्यवहार थियो, नत आफूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुनै सीप र रणनीति नै ।
आफू राजा भएकोमा के–के न भएँ भन्ने भावले उन्मत्त भएर उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गरेका थिए, त्यो पनि असक्षम भन्दै । त्यसपछि उनलाई नराम्रो दशा लाग्यो, किनभने जनमानसमा आफ्नै वैधानिकताको संकट बेहोरिरहेका उनले उनैलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्थामाथि प्रहार गरेर आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानेका थिए ।
अझ हास्यास्पद त के भने स्वच्छ छवि खोज्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्र आफ्ना बाबु महेन्द्रले स्थापित गरेको, राजा र राजपरिवारकै हालिमुहाली चल्ने पञ्चायत व्यवस्था नै विफल पार्ने पूर्वपञ्चहरूको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । यसबाट के थाहा भयो भने उनीसित कुनै झर्झराउँदा, कल्पनाशील नयाँ अनुहार थिएनन् । थिए त तिनै थोत्रा थन्किएका ट्यांकाहरू । मैले ट्यांका भनेर अवममूल्यन गर्न खोजेको होइन ।
उहिल्यै सामान बोक्न अहिलेजस्ता ब्रिफकेस, सुटकेस हुँदैनथे । टिनका बाकस अर्थात् ट्यांका हुन्थे । ती ट्यांका सय ठाउँ कुच्चिए पनि हुनलाई गजबै टिकाउ हुन्थे । खिया लागेका ट्यांकामा खासै नचाहिने तर फ्याँकिहाल्न मन नलाग्ने वस्तुहरू राखिन्थे । पूर्वपञ्च त्यस्तै थिए । तिनैलाई ल्याएर ज्ञानेन्द्र आफ्ना स्वर्गवासी पिताको सपना साकार पार्न चाहन्थे । यसैबाट तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रको भिजन के थियो, कस्तो थियो !
ज्ञानेन्द्रले दुई पूर्वपञ्च फेरे लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा । हुन त ज्ञानेन्द्रको निगाह पाइन्छ कि भनेर माधवकुमार नेपालले समेत लबेदा–सुरुवाल सिलाएका थिए । थापालाईहटाएर उनले आफैले असक्षम भनेर अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्र, बनाउनेले बनाए र बन्ने पनि बने । त्यसपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै तत्कालीन एमाले सरकारमा सहभागी भयो । त्यसका एक आर्किटेक्ट तत्कालीन एमाले नेता (र हालका प्रधानमन्त्री) ओली नै थिए ।
त्यतिले चित्त नबुझेर देउवालाई पुनः अपदस्थ गर्दै ज्ञानेन्द्र आफै कार्यकारी प्रमुख बने, देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुने । कोही नपाएर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई आफ्ना सहयोगी छाने । नागरिक अधिकार दमन गर्न कमल थापालाई खटाए ।
एमाले र कांग्रेसको एउटा कित्ताले साथ दिएका ज्ञानेन्द्रलाई के नपुग्दो थियो । त्यही मौका छोपेर उनले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका भए हुन्थ्यो, तर के गर्थे ! उनलाई त म राजा बनेंँ, के–के न भएँ भन्ने थियो । । राजकीय तानाशाही चलाएर आफूखुसी शासन गर्ने उनको मनसुवामा २०६२–६३ को जनआन्दोलनले तुषारापात गरिदियो । सम्झौं ती दिनहरू, सम्झौं ।
यसर्थ नेपालमा गणतन्त्र राजसंस्थाको पूर्णतः पतन भएको अवस्थामा स्थापित भएको थियो । आफ्नो एउटा बस्ने घरको जोहो नभएकाले नागार्जुनमा बास पाउँ भनेर, २०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग याचना गर्ने ती ज्ञानेन्द्र जो जनभावनाबाट च्युत भएकैले जनआन्दोलनद्वारा निकालिएका थिए, के आज तिनै खतरा उपस्थित गराउन सक्नेगरी मोटा बलिया भइसके ? भए त कसरी भए, यसको कारण खोज्ने दायित्व यथार्थमा राज्यधिकारीहरूको हो र राज्यधिकारीका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् ।
किनभने संघीयतालाई गति दिँदै, लोकतान्त्रिक विधि र आचरणद्वारा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा निर्वाहन गर्नकै लागि उनी निर्वाचित भएका हुन्, उनको दलले केही नपुग दुई तिहाइ अभिमत पाएको हो । यति बलियो जनमतसहितको सत्तापक्षका नेताले यदि गणतन्त्र खतरामा पर्ने डर देख्छन् भने कमजोरी कहाँ छ, त्यो पनि देख्न सक्नुपर्छ । कमजोरी कहाँ भयो र भइरहेको छ, स्वयं थाहा पाउनुपर्छ ।
गणतन्त्रलाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट छैन, विप्लव माओवादीको बन्दुक पनि खतरा होइन । साँच्चिकै खतराचाहिँ अन्यत्र होइन, राज्य सञ्चालनमै छ, जसका फलस्वरुप राज्य–शासनमाथि दिनानुदिन अविश्वास बढ्दो छ । किनभने राजतन्त्र फाल्नुको तात्पर्य नयाँ राजाहरूको राज्याभिषेक थिएन । जनप्रतिनिधि जनता नै हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नै अनुहार प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने थियो ।
राष्ट्रपतिमा राजाको भावमुद्रा देख्नुपर्ला भनेर नसोचिएको देख्नुपर्‍यो, परिरहेको छ । राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै राजाकै हाउभाउ र सवारीको सिको गर्छन् भनेर कसैले सोचेकै थिएन । सोच्ने कुरा पनि थिएन । दलहरू जनताका इच्छा, आकांक्षाका प्रतिनिधि हुनुपर्ने तर दलालका द्रव्यबाट प्रभावित हुनथालेका अनगिन्ती आरोप छन् ।
फलस्वरुप मानिसमा निराशा र हतासा उत्पन्न हुनु किमार्थ अस्वाभाविक होइन । शासन, प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्दोष फँस्ने र दोषी बँच्ने, जालझेल गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षणका घटनाहरू आए, दिन दोहोरिइरहेका छन् । फलस्वरुप, न्याय सम्पादित होला भन्ने आस हराउँदै गएको छ ।
डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जनता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताकै सरकार अनुसारकै व्यवहार र आचरण प्रदर्शित गरिदिएको भए जनता निश्चय नै सडक प्रदर्शनमा आउनुपर्ने थिएन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र उनको हत्याका दोषी पत्ता लगाइदेऊ भन्न फेरि जनता सडकमै आए ।
कराए, कराए गला रुद्ध भयो, तर अझसम्म दोषी पत्ता लगाउन राज्य असमर्थ नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपमा मानिसको शंका प्रहरी, प्रशासन, दलहरू र समग्रमा राज्य शासनमाथि नै गएको छ, जान्छ । गुठी विधेयक विरुद्ध जनता फेरि सडक प्रदर्शनमै ओर्लिनुपर्‍यो ।
निराशा, हतासाका बीच मानिसले संयम गुमाउन थालेको सत्य हो । हरेक घटनामा न्याय यदि सडकमा खोज्न बाध्य हुनुपर्छ भने सरकार, संसद, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । एकातिर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु, त्यसको समुचित सम्बोधन नहुनु, तर न्याय माग्दा उल्टै नागरिकलाई नै दोषी देखिन्छ, किन ?
नित्यप्रति ख्याल राख्नुपर्ने के हो भने राज्य जनसेवाको केन्द्र नभएर भोग गर्ने थलो भइरहेको झल्झली देखिरहँदा त्यस्तो राज्यले आफू लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने नैतिक शक्ति गुमाउँछ । अहिले भएको त्यही हो । मन्त्रीहरूको कुरै नगरौं, प्रधानमन्त्रीले नै लोकदृष्टिमा आदर गुमाउँदै गएका छन् । राष्ट्रपति आफ्नै प्रस्तुतिका कारण बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन्, पूर्व राष्ट्रपतिसमेत यसमा अपवाद थिएनन् ।
भनिएकै छ, लोकतन्त्रले बरु गरिबी सहन्छ, तर आफैले चुनेका प्रतिनिधिको ठालुपन सहँदैन । यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हो । गणतन्त्र खतरामुक्त बनाउन यसर्थ शासक आफै सच्चिनुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको गाथा गाएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा अनुदित हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५६
भाद्र ६, २०७६ केशव दाहाल
राजनीतिमा अग्रगामी शक्ति भनेको के हो ? के सबै कम्युनिस्ट प्रगतिशील हुन्छन् ? के नेपाली कांग्रेस सर्वेसर्वा लोकतान्त्रिक पार्टी हो ? आजलाई यस्तै प्रश्नमा थोरै विमर्श गरौं । यद्यापि यी प्रश्नमा प्रवेश गर्न केही सन्दर्भ उल्लेख गर्छु । जस्तो– नेपालमा प्रगतिशील नाम गरेका विभिन्न संगठन छन् ।
प्रगतिशील पेसाकर्मी, प्रगतिशील प्राध्यापक, प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी । त्यसो त हामीसँग लोकतान्त्रिक संगठनहरू पनि बग्रेल्ती छन् । सरकारी अड्डा, सहरका गल्ली र चोकहरूमा लोकतन्त्र र प्रगतिवाद यत्रतत्र मौलाएको देखिन्छ ।
कुनै बेला यस्तो पनि थियो कि अमुक पार्टी फुट्यो भने, विभाजित हुनेले आफ्नो नामको पछाडि फुर्को जोड्थ्यो– ‘लोकतान्त्रिक’ । प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, लोकतान्त्रिक भनेको चाहिँ के हो ? कतै हामी आफ्नै कर्मले लोकतन्त्र र प्रगतिवादकै हुर्मत लिइरहेका त छैनौं ?
मेरा एक मित्र छन् । गाउँमा खेती किसानी गर्छन् र विद्यावारिधिको तयारी गर्दै छन् । कामको सिलसिलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर घुमेर फर्किएको रात उनले मसँग प्रश्न गरे, ‘प्रगतिशील प्राध्यापकहरूको बिगबिगी भएको मुलुकमा विश्वविद्यालयचाहिँ किन गएगुज्रेको ?’ उनले चर्किंदै भने, ‘आफ्नै कर्मथलो नसुधार्ने फेक प्रगतिवाद हो त्यो ।’ उनको अर्को पनि प्रश्न थियो, ‘स्वयं कानुन व्यवसायीहरू लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भएको देशमा लोकतन्त्रको अवमूल्यन किन ?’ साथीको तीतो निष्कर्ष थियो– नेताहरू लोकतन्त्रवादी, समाजवादी वा गणतन्त्रवादी हुनु सबै खाइजीविका मात्र हो । सडकमा तमासा देखाएर औषधी बेचेजस्तो ।
गत साता एक कम्युनिस्ट नेतासँग जम्काभेट भयो । भेटमा राजनीति, समाज र समयको परिचर्चा हुने नै भयो । उनी थिए, सरकारी कम्युनिस्ट । सरकारमाथि मेरा प्रश्न, आलोचना र अपेक्षा सुनेर उनले भने, ‘प्रगतिशील सरकारविरुद्ध यति बेला प्रतिगामीहरू सलबलाउँदै छन् । देशी–विदेशी साम्राज्यवादीहरूले प्रगतिशील शक्तिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।’ मैले सोधेँ, ‘कमरेडले भनेको प्रगतिशील सरकार कुन हो ?’ चर्को स्वरमा उनले थपे, ‘सारमा यो सब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको षड्यन्त्र हो ।’ मैले उनको भनाइलाई पुष्टि गर्न माग गरेँ ।
उनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्न सुझाव दिए । बस, त्यही इतिहास जुन इतिहासले हाम्रा कम्युनिस्टहरूलाई सबैभन्दा भुत्ते, एकलकाँटे र यान्त्रिक बनाएको छ । कुरा सुन्दा र व्यवहार हेर्दा लाग्छ, राजावादीहरूले आफूलाई वैकल्पिक भन्नु, सरकारी कम्युनिस्टहरूले आफूलाई प्रगतिशील भन्नु, कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नु र माओवादीले समय चेतनाको कुरा गर्नु सर्वाधिक फाल्तु कुरा हुन् ।
समय र राजनीति
राजनीति र समयको साइनो निकै रोचक छ । कस्तो राजनीति गर्ने ? कस्तो विचार समाउने ? कस्ता मुद्दा उठाउने ? र सपनाहरू के देख्ने ? राजनीतिमा आउने यावत् प्रश्नको जवाफ समयसँग हुन्छ । समयले नै को प्रगतिशील र को प्रतिगामी, निर्धारण गर्छ । यो अर्थमा राजनीतिले समयको चाल र सपनालाई बुझ्नुपर्छ ।
अन्यथा समयभन्दा पछाडि हिँड्नेहरू पुरातनवादी हुन्छन् । समय सँगसँगै घस्रिनेहरू यथास्थितिवादी हुन्छन् । समयलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनेहरू प्रगतिशील हुन्छन् । राजनीति, समाज र समयको चक्रलाई उल्टो घुमाउनेहरू पश्चगामी हुन् । समाज र समयको चक्रलाई भविष्योन्मुख गर्नेहरू अग्रगामी । पश्चगामी र अग्रगामी धारबीच लखरलखर गर्नेहरू यथास्थितिवादी । प्रगतिशील र अग्रगामी हुन कम्युनिस्ट हुनुपर्दैन, न लोकतान्त्रिक हुन कांग्रेस नै हुनुपर्छ । त्यो मूलतः समयचेतना र राजनीतिक गतिशीलताको कुरा हो ।
कुनै बेला कम्युनिस्ट प्रगतिशील थिए । भन्थे– संसार न्यायपूर्ण हुनेछ । श्रमजीवीलाई सपना देख्न पनि सकस भएका बेला कम्युनिस्ट घोषणापत्रले मान्छेलाई मुक्तिको सपना दियो । नेपालमै पनि कम्युनिस्ट यसकारण प्रगतिशील थिए कि उनीहरू सामाजिक न्याय, जीविका र गणतन्त्रको कुरा गर्थे । कुनै बेला कांग्रेस पनि प्रगतिशील थियो । किनभने कांग्रेसजन लोकतन्त्रको कुरा गर्थे ।
निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको चाहना निश्चय नै अग्रगामी कुरा थियो । तर समय तीव्र गतिमा बढ्यो । आज पुँजीवादले रंग फेर्‍यो । वर्ग पक्षधरतालाई मानवतावादले उछिन्यो । शोषणका रूपहरू फेरिए । राज्यको चरित्रमा बदलाव आयो । लोकतन्त्रमाथि नयाँ–नयाँ प्रयोग हुँदै गए । औपचारिक लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा फेरियो । यस्तो समय आइपुग्यो, कांग्रेसको लोकतन्त्र पुरानो भयो ।
अतः प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— समयसँग नहिँड्ने कांग्रेस केको लोकतान्त्रिक ? कम्युनिस्टको कुरा पनि त्यही हो । राजमार्गलाई लोकमार्ग भन्दैमा क्रान्ति सकिँदैन, न त नयाँ दरबारमा राष्ट्रपतिलाई स्थापित गर्दैमा गणतन्त्रको दायित्व पूरा हुन्छ । तर भयो त्यस्तै । र समयक्रममा कम्युनिस्टहरू स्वयं सामाजिक न्यायका पछिल्ला मुद्दाबाट विमुख हुँदै गए ।
कालक्रममा कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट रहेनन् नै, उनीहरू बिस्तारै वामपन्थी र प्रगतिशील कित्ताबाट समेत स्खलित भए । कुरा स्पष्ट छ, पुरानो विचार, समय र सपनाको वफादार सेवक हुँदैमा कोही प्रगतिशील हुँदैन । प्रगतिशील हुनु भनेको नयाँ युगलाईआह्वान गर्नु हो । अगाडि हिँड्नु हो । परिणाम निकाल्नु हो ।
विश्वराजनीतिमा समयचेतनाको कुरा सर्वाधिक महत्त्वसाथ उठाइन्छ । समयचेतना भनेको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने ज्ञान पद्धति हो । समयचेतनाका तीन आयाम छन्— समग्र मानव सभ्यताको विगत केलाउने, वर्तमानलाई बुझ्ने अनि भविष्यको चित्र बनाई अघि बढ्ने ।
नेपालमा कुरा अलिक भिन्न छ । हाम्रा पुराना राजनीतिक दलहरू समयचेतनाको भन्दा धेरै इतिहास–चेतनाको कुरा गर्छन्, जोसँग संघर्ष गरेको, जेल परेको, लडेभिडेको इतिहास छ । समस्या यहीं छ, इतिहास–चेतनाले मात्र समयको बोध हुँदैन । समयचेतना भनेको इतिहास बुझ्नु मात्र होइन । यसका लागि वर्तमान बोध गर्ने सामर्थ्य र भविष्य देख्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रा प्रगतिशील संगठन किन प्रभावहीन भए ? ती विश्वविद्यालय, स्कुल र अस्पतालमा प्रभावहीन भए । हाम्रा लोकतान्त्रिक संरचनाले किन परिणाम दिन सकेनन् ? ती संसद, सामाजिक न्याय अनि आर्थिक समृद्धि र विकासमा प्रभावहीन भए । हाम्रा कम्युनिस्ट समाजवाद निर्माणमा, गरिबका झुप्रामा किन प्रभावहीन भए ? कांग्रेस लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा किन प्रभावहीन भयो ।
यसकारण कि, उनीहरूले इतिहास हेरे मात्र, बुझेनन् । उनीहरूले समयचेतना बोध गर्ने सामर्थ्य गुमाए, समाजबाट विमुख भए । आखिर ‘व्यक्तिगत नाफाभन्दा दायाँबायाँ केही छैन’ भन्ने हाम्रा कांग्रेस र कम्युनिस्ट अहिले यथास्थितिको त्यो खाडलमा भासिए, जहाँबाट दूर भविष्यको त कुरै छाडौं, आफ्नै सत्ताको दलानसमेत देखिँदैन ।
विकल्प हावामा बन्दैन । राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा र आधार पनि समयचेतना नै हो । इतिहास बुझ्ने, वर्तमानलाई गहिरोसँग अनुभूति गर्ने र भविष्य देख्ने राजनीति नै वैकल्पिक राजनीति हो । यस्तो राजनीति जसले लोकतन्त्रलाई आजको आवश्यकताबाट हेर्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिका मुद्दालाई आजको आवश्यकतासँग एकाकार गर्छ । जो अग्रगामी हुन्छ, जो सुसंस्कृत हुन्छ ।
हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको छ, जो मानव सभ्यता, सपना र समयप्रति सचेत बनोस् । जवाफदेही होस् । त्यो हो– प्रगतिवाद, त्यो हो– अग्रगमन, त्यो हो– लोकतन्त्र ।
आमाले सुनाउने परिलोकको कथाजस्तो मायावी हुँदैन राजनीति, न त यो भूत कथाजस्तो रहस्यमयी हुन्छ । राजनीतिमा प्रगतिशील हुनु, समाजवादी हुनु वा गणतन्त्रवादी हुनु स्वैरकल्पना होइन । प्रगतिशील हुनु भनेको भविष्यतिर हिँड्नु हो । लोकतन्त्रको कुरा गर्नु जीवनलाई अझ धेरै स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउनु हो ।
गणतन्त्रवादी हुनु भनेको तानाशाहलाई घोडाबाट झार्नु र वायुपङ्खी घोडामा आफू सवार हुनु होइन, बरु सबै अहंकारका दरबार भत्काउनु हो । अन्यथा भूत कथाजस्तो रहस्यमय राजनीतिको के काम ? जनतालाई सुख नदिने राजनीति न प्रगतिशील हुन्छ, न लोकतान्त्रिक । बस त्यो भ्रम हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५५